काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार बालेन शाहले मतगणनामा प्रतिनिधि राख्न नदिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफत्ति जनाएका हुन् ।
उनले ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको एक जना साझा प्रतिनिधि राख्ने कुरा कानुनी, व्यवहारिक र लोकतन्त्रको कसीमा हदैसम्मको अन्यायपूर्ण र लोकतन्त्रको विरुद्धमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
साथै बालेनले यसले मतगणना शान्तिपूर्ण हुँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
मतगणना गर्दा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको एकजना प्रतिनिधी भन्ने कुरा आयो। सबै उम्मेदवार बराबर भनेर लोकतान्त्रिक पद्दतिको निर्वाचन भएको छ। उम्मेदवारी दिने समय होस् वा शुल्क वा प्रक्रिया, कतै पनि पार्टीगत उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको भिन्नता सोचिएको छैन। हरेकलाई हरेकसँग प्रतिष्पर्धी मानिएको छ ।
हरेकले पाउने प्रत्येक मतको 'मतभार' बराबर छ। यस्तोमा दलगत र स्वतन्त्र भनेर गणनामा किन फरक गर्न खोजिदैछ?,' उनले भनेका छन्, 'स्वतन्त्रहरु आफैँमा फरक-फरक विचार, समूह र उम्मेदवार हुन्। उनीहरु आफैँ बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
यस्तोमा पाँच जना स्वतन्त्र भनेर के आधारमा एकै डालोमा राखिएको हो? कुन-कुन विचारधारा वा सम्बन्धले पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक जनामात्रै प्रतिनिधि छान्ने हो? पाँचजनाले एकजना मात्रै प्रतिनिधिको छनौट गर्ने प्रकिया र बिधि के हो?
आयोगले सो किसिमको चुनावका लागि बनाएको कार्यबिधि कहाँ छ ? पक्कै पनि यसको लोकतान्त्रिक जवाफ छैन । त्यसैले, सामान्य प्राबिधिक कुराहरुमा सम्झौता नगर्न लोकतन्त्रसँग र आफ्नो प्रतिनिधि राख्न पाउने उम्मेदवारको अधिकारसँग खेलवाड नगरियोस् ।
विनोद शाही मृत्यु प्रकरण- मेयरसहित सात जना पक्राउ
अछाम । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ मा किशोर विनोद शाही मृत्यु प्रकरणमा मेयर अम्बिका चलाउनेसहित सातजना पक्राउ परेका छन्। विनोद शाहीको हत्या अभियोगमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर चलाउनेसहित सात जना प्रकाउ
भरतपुरको काम हेर्न पोखराका मेयरसहितको टोली चितवनमा
पोखरा । पोखराका मेयर धनराज आचार्य र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले गरेका कामबारे जानकारी लिन आचार्यको टोली भरतपुर पुगेको थियो । दुई नगरबीच सहकार्यका लागि
समाचार संकलनमा पत्रकार मिश्रलाई मेयर बालेन साहकाे अवरोध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हिमालय टेलिभिजनका पत्रकार प्रिन्स मिश्र समाचार संकलनमा अवरोध गरेका छन् । महानगरको वातावरण विभागमा रिपोर्टिङका क्रममा पुगेका मिश्रलाई मेयर बालेन्द्र साहले सूचना संकलनमा अवरोध पुर्‍याएको